Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 03/07/2020)
Kule minyaka 10 iminyaka, izigidi yabona njani yingenelo ngayo ukuthatha uloliwe! emasimini Rich afakwa, ugu ekhanya kwaye entabeni ye izixhobo that are never mentioned in travel brochures or blogs. Ukuhamba ngololiwe kuyonwabisa, lula kunye isipaji-friendly indlela ukusuka kwindawo A ukuze aveze B, ngoko musa ukucinga kabini, ukuthatha uloliwe!
Into yesibini entle malunga noololiwe eYurophu kwaye ngokubanzi yindlela abanobungakanani bayo ngohlahlo-lwabiwo mali. Hayi nje bebaninzi kangaka kukho kwiindawo cheap ukuba ukhethe kusuka, kodwa ngeendlela ezininzi ukuze unciphise iindleko zokuhamba jikelele. Ngoko ke ukuba ngabomvu ukubetha cishe kaloliwe kungekudala, apha ezimbalwa iincam ezinkulu ukusebenzisa:
Nokuba wena umfundi othanda ukuhamba okanye umhambi rhoqo ukuthatha uloliwe yonke imihla, ilele uloliwe nga ngokumandla wamgawula imali echithwa yokuhlala phantse kwisiqingatha. Yeyona ngendlela emangalisayo ukonga ixesha kakhulu njengoko ingalala isixeko enye uvuke kwenye. Naxa sekuthethiwe oku, kubalulekile ukuqonda iintlobo ezahlukeneyo lukaloliwe ebusuku yokuhlala.
Ukupakisha ukutya yakho yeyona ndlela ibubulumko ukuya ngayo. Ngokungafaniyo ukuhamba rhoqo ngebhasi okanye imoto, xa uthatha uloliwe eneneni udle kakuhle. izihlalo ezininzi itafile tsala-okanye itafile esisigxina phakathi izihlalo ezimbini. kunjalo, ukuba kufuneka ukuthenga ukutya kwakho kunye neziselo ngexesha uhambo lwakho, Kulungile. Isidlo kuloliwe ayikho ngokugqithiseleyo pricey kwaye amaninzi isicelo amakhadi ezinika izaphulelo.
Thatha Uloliwe ku Gcina-A-Train, Khetha indawo yakho uze uthabathe ngololiwe ukuya phantse naphi eYurophu kwi namaxabiso afikelelekayo kwimalike! and, Qikelela ukuba? Xa ufumana uloliwe itikiti lakho Gcina A Isitimela, Inkqubo lokubhukisha kwenziwa phakathi 3 imizuzu, njalo apakishe iibhegi zakho kwaye babe yonke into elandelayo!
#nighttrain #traveleurope tips zokuhamba train traveltips